Sebenzisa ngokugcwele umatilasi we-pocker Foam ukuthuthukisa ibhizinisi lakho
Ipulaki inekhanda elisicaba, ikhanda lesikwele noma isokhethi; Ukuxhumeka okuhlanganisiwe ngakolunye uhlangothi ukuvikela inhlanganisela yamantongomane we-hex namasongo. Lokhu kufakwe entwasahlobo yengxabano ngaphakathi komzimba ogcina ipulaki liqinile. Zenziwe ngethusi, zethusi, i-galvanitinblack esetshenziswa yi-ironmoton ngokusetshenziswa njengendawo yegesi.
Ehlobo, ukushisa okwedlulele kwesakhiwo kungena emhlabathini ngohlelo lokupholisa, nasebusika, ukushisa kuyakhishwa emhlabathini. Ngokusho koMnyango Wezamandla wase-US, izindleko ezijwayelekile zohlelo olunjalo zingama- $ 7 500. Ucwaningo lomnyango wamandla lukhombisa ukuthi ngokuya ngokonga ugesi, ukutshalwa kwezimali kungatholwa kungakapheli iminyaka emi-2 kuya kweyi-10.
Amanye amadivayisi we-Apple, kanye nemali engenayo nokuthengwa kokuvuselela izinsizakalo ezifana nokubhaliselwe kohlelo lokusebenza, ukulandwa kwe-movie kanye nesitoreji se-iCloud kanye nesitoreji se-iCloud kanye nesitoreji iCloud. Ngenkathi ukukhula emakethe ye-smartphone kunciphise, amanani akhuphukayo asiza i-Apple yandise futhi yandise isabelo sayo semakethe. Umcimbi wangoLwesithathu uyeza futhi i-United States izofaka amanani entela kwimikhiqizo evela kuChinas.